मधेस आन्दोलनले आज १० वर्ष पूरा गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालिन सात पार्टीले सन् २००७ मा अन्तरिम संविधान जारी गरे। अन्तरिम संविधानमा संघीयता थिएन। सद्भावना पार्टी सरकारमा थियो। फरक मत लेखेर सरकारमा बस्ने सद्भावना पार्टीको निर्णय अन्ततः आत्मघाती नै सावित भयो। मधेसी अधिकारको सवालमा लामो इतिहास बोकेको एकल परिचय बनाएको सदभावना पार्टीलाई उछिन्दै मधेश राजनीतिमा मधेशी जनअधिकार फोरम र उपेन्द्र यादवको उदय भयो। भुल्नै नसक्ने नोट अफ डिसेन्टको दुर्गती सम्भवतः सद्‌भावनाले अहिले पनि अनुभूति गरिरहेको होला।
सम्पूर्ण विधि विधान र प्रक्रिया छलेर एउटा सिंगो समुदायलाई संविधान निर्माणभन्दा बाहिर राखेर संविधान जारी गरियो। मधेस एक वर्षसम्म आन्दोलित भयो। दुर्भाग्यपूर्ण मधेसी नाकाबन्दी गर्न बाध्य भए। सदरमुकाममा गरिएका आन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई छाति र टाउको ताकी ताकी गोलि हानियो, र झण्डै चार दर्जनको हत्या भयो। तर अझै पनि मधेस मान्ने मुडमा छैन। उनीहरुको मनमा एउटा कुराले जरा गाडेको छ– विभेद र असमानताको विरूद्ध यो पुस्ताले लडेन भने मधेसीहरुका भावी सन्तानले निकै कष्टकर जीवन विताउनुपर्नेछ। त्यसैले नेपाली राज्यप्रति 'सेन्स अफ एलिनेशन' बढेर गएको छ। दुर्भाग्यबस, काठमाडौंले फेरि पनि मधेस बुझ्न ढिलो गरिरहेको छ। खासगरी नेकपा एमालेको पहाडी जनमत एकतृत गर्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नाराले अन्ततः मधेसलाई यस्तो कर्नरमा पुर्याउँदैछ जहाँबाट मधेसलाई फर्किन गाह्रो हुन्छ ।
उनीहरुको यो विश्वास र लाइनलाई कति लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने कुरा अहिले संविधान संशोधन कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। मधेशी युवाहरुलाई सेनालगायत राज्यका विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी नीतिको आधारमा कसरी प्रतिनिधित्व गराइन्छ र मधेसीलाई नेपाली राष्ट्रियताको मुलधारमा कसरी जोडिन्छ भन्ने नीतिमा भरपर्छ। त्यस्तै सत्ताधारीहरुले मधेसलाई अझ ‘कर्नर' गर्छन् कि मधेसीहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्छन् यसमा पनि निर्भर गर्छ। त्यस्तै, मधेसी दलहरु एक भएर फेरि चुनाव लडी नेपाली राजनीतिको मुल केन्द्र बन्नसक्छ कि सक्दैन त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो।
तपाई राष्ट्रपतिज्यूले बोलाएको गरीमामय वैठकमा मधेशीहरु देश टुक्राउने योजनामा लाग्दैछन् भन्नु सम्पूर्ण समुदायकै दानवीयकरण गर्नु हो। तपाईँलाई जसले सूचना दियो त्यसको र तपाईको ‘माइन्डसेटमा' खोट छ। नागढुंगा तल कहिले नझर्नेहरुले मधेशीप्रति भम्र पालेर बसेका छन्। भोटका लागि पहाडमा मधेशीप्रति फैलाइएको घृणा, भम्र र आशंकाका पछाडि नलाग्न म गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँचीका जस्ता जिल्लाका दाजुभाई तथा दिदी बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरु ढुक्क हुनुहोस्, मधेसीहरुले खोजेको विभेदको अन्त्य र समानतामात्रै हो। तपाईहरुजस्तै मधेसीहरुले पनि मर्यादित जीवन बाँच्न मात्र खोजेका हुन्। यसमा साथ दिनुस्। विभेद रहे दाजुभाईको भान्सा छुट्टिने हो, गाँउ नै छुट्टिने होइन।
एमालेले संविधान संशोधन हुन नदिने भन्दैछ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीभित्र पनि यस्ता सोच भएका केही नेताहरु छन्। यो संविधान कार्यान्वयनले कसलाई फाईदा पुग्छ, विचार गरौं। संविधान संशोधनले त हामीलाई भन्दा पनि सिंहदरबारको सत्ता निरन्तरतालाई फाइदा पुग्छ। खसआर्यको स्वार्थको नै रक्षा गर्छ यो संविधानले। त्यसैको स्वीकार्यता बढाउछ यो संशोधनले। संविधान कार्यान्वयन नभए हुने खानेलाई नै धेरै असर पर्ने हो। केही सीमित मधेसीहरुलाई पनि असर पर्ला, तर अधिकांश मधेसीहरुसँग केही छँदै छैन, उनीहरुलाई के नै असर पर्छ, उनीहरुको के नै गुम्छ? यो पनि नभुलौं, संविधानमा संशोधन खोज्नेलेनै संविधानलाई चिर स्थायी बनाउँछन्। नेपाली कांग्रेसले २००४ को संविधानमा संशोधन मात्र खोजेको भए राणाविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुने थिएन। कांग्रेस र कम्युनिष्टले पंचायती संविधानमा संशोधन खोजेको भए वहुदलीय व्यवस्था आउने थिएन। माओवादीले २०४७ सालको संविधानमा संशोधन खोजेको भए, त्यसमा सुधार आउथ्यो होला, तर संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैनथ्यो होला।
त्यसकारण संविधान संशोधन भनेको बिद्यमान ब्यवस्थालाई स्थिरता र निरन्तरता दिने हो। संशोधन भनेको असन्तुष्ठीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया मात्र हो, चित्त बुझाउने मेसो हो। तपाईहरुले संशोधनलाई इन्कार गरिरहनुभयो भने, एक दिन मधेसले पनि भन्नेछ, हामीलाई पनि संशोधन चाहिन्न, यो संविधान नै चाहिन्न। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आउने असन्तुष्टिको ज्वारभाटाले संविधान मात्र होइन धेरै कुरा फेर्छ। संशोधन अस्वीकार गरेर एमालेले खोजेको त्यही हो? प्रकाशित मिति:
बुधबार, माघ ५, २०७३ ०९:५१:२९